गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » यौन जिज्ञासा र समाधान » हस्तमैथुन गर्नु कतिसम्म राम्रो वा नराम्रो के हो ?
यौन जिज्ञासा र समाधानस्वास्थ्य
काठमाडौं । म २२ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । शारीरिक आनन्दको स्वादपनि लिइसकेको छु ।
अविवाहित भएका कारण चाहेका बेला पार्टनर पाउन सम्भव हुने कुरै भएन । चाहना हस्तमैथुन गरेर पूरा गर्छु ।
हस्तमैथुन गर्दा मैले सम्पर्क राखेका पार्टनरका नीजि अंग सम्झन्छु र पत्रपत्रिकामा छापिने ग्ल्यामरस तस्वीर तथा कहिलेकाहीँ पोर्न फिल्म पनि हेर्छु ।
तर, मलाई अहिले आफ्नो हस्तमैथुन गर्ने बानीदेखि डर लाग्न थालेको छ । कतै मैले गल्ती त गरेको छैन ? विवाहपछि पनि हस्तमैथुनमै बढी लागुँला कि भन्ने पिर छ । दुब्लो पनि छु । हस्तमैथुन गर्नु कतिसम्म राम्रो वा नराम्रो के हो ? – ए कार्की
विशेषज्ञ डा. शर्मिला मजुम्दार / हस्तमैथुन भन्ने शब्दको अर्थ हातले गरिने मैथुन भन्ने बुझिए पनि त्यसको भावार्थ व्यापक छ । आफ्नै वा आफ्नो पार्टनरको नीजि अंगलाई चरम सुखप्राप्तिको हदसम्म हात वा विशेष पद्धति अथवा उपकरणका सहायताबाट उत्तेजित पार्ने प्रक्रियालाई हस्तमैथुन भनिन्छ । आत्मरतिको यो सबैभन्दा सजिलो र बहुपरिचित माध्यम हो । पार्टनर सँगसँगै बसेर अलगअलग गर्ने वा परस्परमा एकअर्कालाई गरिदिने हस्तमैथुनलाई पारस्परिक हस्तमैथुन भनिन्छ ।
हस्तमैथुन सबै उमेर र लिंगका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने आत्मरतिको माध्यम हो । यो व्यवहार आधुनिक युगको सभ्यताको मात्र उपज होइन । हस्तमैथुनलाई प्राचीन र प्रागऐतिहासिक कालका आदिमानवदेखि हालसम्म प्रत्येक युगका स्त्री पुरुषले, समलिंगी र उभयलिंगीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसको प्रयोग प्रक्रिया र साधनमा व्यापकता आएको भने अवश्य हो । सामान्यतया हस्तमैथुनसँग मनोवैज्ञानिक सहयोगीका रूपमा फ्यान्टासी पनि प्रयोग हुने गर्छ ।
तर, शतप्रतिशत अवस्थामा यसो हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । यसका साथै विभिन्न सामग्रीहरूको अध्ययन वा अवलोकन अथवा एकान्तमा तिनको सम्झनामात्र पनि हस्तमैथुनका लागि सहयोगी साधन बन्न सक्छन् ।
हस्तमैथुन विभिन्न तरिकामध्ये हात वा हातसँग अन्य सामान्य अथवा विद्युतीय साधन (डिल्डो), भाइब्रेटर, जी स्पट स्टिमुलेटर, थुक, जेलीको प्रयोगद्वारा नीजि अंगको घर्षण वा मर्दन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तरिका हुन् । जिब्रो र ओठको प्रयोग पनि त्यसपछि बढी प्रयोग हुने तरिकामध्ये पर्छन् । मुखमैथुनभन्दा अलग्गै हस्तमैथुनका लागि पनि यिनीहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ । यसबाहेक नीजि अंगलाई अन्य कुनै नरम सतहमा घर्षण गर्ने प्रक्रिया पनि प्रचलनमा छ ।
पछिल्ला दुई तरिकामा हातको प्रयोग नहुने भए पनि ती सबै व्यवहारलाई हस्तमैथुन भन्ने गरिन्छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ जोडीहरूद्वारा एकअर्कासँगै सन्तुष्टिका लागि गरिने हस्तमैथुनलाई पारस्परिक हस्तमैथुन भनिन्छ । पारस्परिक हस्तमैथुन दुई किसिमका हुन्छन् । पहिलोमा एकअर्काका नीजि भागलाई नछोइकन तर एकअर्कासँगै रहेर आ–आफ्ना नीजि अंग चलाएर गरिने हस्तमैथुन र द्रोस्रोमा एकले अर्काका नीजि भागलाई सँगसँगै चलाइदिएर गरिने हस्तमैथुन पर्छन ।
हस्तमैथुनबाट कुनै पनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक हानि हुन्छ भन्नु भोक लागेको मानिसलाई खाना खाएर वा निद्रा लागेको मानिसलाई सुतेर हानि हुन्छ भन्नुजस्तै हो । मैले आफ्नो चिकित्सा पेशाको अनुभव तथा सञ्चारमाध्यममा यससँग सम्बन्धी समस्याबारे बोल्ने वा जवाफ दिने क्रममा धेरै किशोरकिशोरी र युवायुवतीका यससम्बन्धी द्विविधा र जिज्ञासा पाएको छु ।
उम्लिएको चाहनालाई सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भरपर्दो विधिमा पर्छ हस्तमैथुन । हस्तमैथुनले आतुर पुरुष र स्त्रीलाई आफूले राख्न नचाहेको वा सामाजिक नैतिक मान्यताबाहिर परेको शारीरिक सम्बन्धबाट बचाउँछ । असुरक्षित शारीरिक सम्पर्कबाट सर्न सक्ने विभिन्न यौन रोगबाट जोगाउँछ । हस्तमैथुन गर्ने अनि हस्तमैथुन गरेकामा अनावश्यक पछुतो मानेर आफ्नो मनमस्तिष्कलाई अनावश्यक दबाब पु¥याउने र हस्तमैथुनबाट दुब्लाइन्छ, विवाहपछि यौनजीवन बिग्रन्छ, नीजि अंगहरु टेढो वा सानो हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रम पालेर आफूलाई अस्वस्थ मान्छे ठान्नु भ्रमबाहेक केही होइन ।
हस्तमैथुनकै कारण मानिस दुब्लाउँदैन । कति हस्तमैथुन गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको यौन चाहना भएका बेला यौनसाथीको अभावको परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हस्तमैथुन गरेको विषयलाई चिन्ताको रूपमा लिएपछि मात्रै कोही दुब्लाउन सक्छन् । अन्यथा हस्तमैथुन गरेकै भरमा मानिस दुब्लाउने कुरा वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको छैन । तर, हस्तमैथुनलाई आवश्यकताभन्दा बढी लतका रूपमा प्रयोग गर्ने र यसलाई शारीरिक इच्छा पूराको स्थायी विकल्पका रूपमा प्रोत्साहन दिएर धेरै नै अग्रगामी बन्ने दुस्साहस कसैले गर्नु हुँदैन ।
झट्ट हेर्दा अत्यधिक चर्चाका कारणले गर्दा हस्तमैथुन पुरुषहरूको मात्र पेवा व्यवहारजस्तो देखिन्छ । तर, हस्तमैथुन गर्ने महिलाको संख्या पनि कम छैन । हस्तमैथुनले महिलालाई आफ्नो यौनव्यवहार तथा त्यसको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा सिक्ने अवसर प्रदान गर्छ । हस्तमैथुनका बेला हुने तरल स्रावले नीजि अंगहरूमा हुने रक्तसञ्चारलाई समेत सन्तुलित गर्छ । कतिपय महिलाले महिनावारीको बेला हुने पीडा कम गर्नसमेत हस्तमैथुनको उपाय अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । यो ठिक हो । तपाई कार्की जीपनि यो सतप्रतिशत ठिक हो भनेर सोच्नु मनमा चिन्ता नलिनुहोला । तपाईकापनि कुनै जिज्ञासा भए राख्नुहोला हामी विशेषज्ञ डाक्टर शर्मिलाबाट तपाईलाई जवाफ दिनेछौ । इन्बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ ।
किशोरी अवस्थाको स्तन र योनी कस्तो हुन्छ ?
पार्टनरसँग ओछ्यानमा स्ट्यामिना पुगेन ? मिलाएर शिलाजीत सेवन गर्नुहोस्
के तपाईको पार्टनर सेक्स एडिक्ट त छैन, थाहा पाउँन यी ३ सजिलो उपाय अपनाउनुहोस
पुरुषलाई महिलाको पुष्ट छाती किन यति धेरै मन पर्छ
यी कार्यालयकी हाकिम एक पटक भेट्नुहोस् : जसले कर्मचारीहरूलाई हस्तमैथुन ब्रेक दिन्छिन्